Thursday December 03, 2020 - 11:25:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya 52-da gobol ee wadankaas ka koobanyahay ayaa sheegaya in markii ugu horraysay taariikhda hal mar isbitaallada ladhigay dad gaaraya 100,226 qof bukaanno ah oo xaaladoodu liidato.
Dhakhaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in bukaannadii uu shalay soo ritay Carona dhammaantood ay xaalad halis ah ku suganyihiin islamarkaana ay qasab noqotay in isbitaallada ladhigo si xaaladooda loola tacaalo.
Guddiga Covid Tracking ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in shalay oo kaliya ay Carona udhinteen dad gaaraya 2700 oo ruux waana maalintii labaad xiriir ah oo dhimasho ka badan 2600 lagasoo calaamadeeyo Carona.
Mareykanku wuxuu galay kaalin cusub oo horay aan uga jirin caalamka taas oo ah in maalin qura ladiiwaan geliyay wax kabadan 100,000 bukaan oo xaaladoodu liidato una baahan isbitaallo in ladhigo.
Guddoomiyaha gobolka California ayaa sheegay in shalay oo kaliya ay diiwaan geliyeen 20,000 oo bukaan taas oo ka dhigan in gobolkan yahay midka ugu daran ee Carona uu dadka kusoo ritay tan iyo bilaabashadii cudurkan safmarka ah.
waxa loogu yeero ciidda Mahad naqa oo maalmo ka hor looga dabaal degay dalka Mareykanka ayaa larumeysanyahay in ay kaalin weyn ku laheed faafintaanka xadka dhaafka ah ee Mareykanka lagasoo calaamadeeyay.
Kumanaan kun oo qof american ah ayaa safarro diyaaradeed iyo kuwa tareen ugalay gobollada kala duwan ee wadankaas si ay ehelladooda ulasoo kulmaan waxaana dhacay xaflado isdhaxgal ah arrinkaas oo keenay in Carona uu dhaxdooda ku faafo halaaggana uu ka dhigo mid si xowlli ah ku socda.
Tirada guud ee dadka Mareykanka ugu dhintay Carona ayaa ka badan 273,000 oo ruux, mareykanka ayaa ah dalka ugu dhimashada iyo bukaannada badan caalamka marka laga hadlayo Carona halka Baraazil uu yahay dalka 2-aad, hindiya ayaa kujirta jaalinta sedaxaad